Plugins sy sivana mihoatra ny 35 ho an'ny Photoshop maimaim-poana | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | Photoshop, dia midika hoe, Tutorials
Androany dia manana loharanom-baovao tsy hita isa isika sivana ho an'ny Photoshop sy plugins, ny fandaharana quintessential famolavolana sy fanovana sary. Taona vitsivitsy lasa izay dia nanana ny fahafaha-miditra amin'ny alàlan'io karazana loharanom-pahalalana azo ampiasaina amin'ny asan'ny mpanjifa io ihany koa izahay, na dia milaza ny marina aza ny repertoire dia tsy dia lehibe toa ny ankehitriny.
Ireto plugins sy sivana 40 ireto ho an'ny Photoshop Hahita andiana hetsika maromaro ihany koa ianao hanasongadinana ireo sanganasa sasany, miala amin'ny famolavolana sasantsasany ary miala sasatra raha mifantoka amin'ny asa hafa mety maharitra kokoa ianao. Andiana loharanom-pahalalana tonga lafatra ho an'io programa io izay nanova ny famolavolana sy ny famerenana sary an-tsary betsaka tao anatin'izay folo taona lasa izay.
Ny sasany amin'ireo rohy dia hitondra anao any amin'ny fampidinana ireo hetsika, izay azo alaina avy amin'ny Photoshop avy eo am-baravarankely. Izahay dia mitady ny "hetsika fampidinana" ary avy amin'ny fisie zip izay nosintaininay, dia hitanay ny toerana misy azy handefasana azy amin'ny Photoshop. Mila manokatra sary fotsiny ianao hampiharana ny hetsika avy amin'ny fikandrana hetsika iray ihany. Ho an'ny presets, avelanay ianao a tutorial izay hanazavana ny fomba fametrahana azy ireo amin'ny Photoshop sy Lightroom.
1 Tutorial: ny fomba fametrahana preset ao amin'ny Photoshop sy Lightroom
1.1 Mametaka preset amin'ny Photoshop
1.2 Mametaka preset ao Lightroom
2 Plugins sy sivana Photoshop maimaim-poana
2.1 Fanaraha-maso Layrs
2.2 Sepia mampatahotra
2.3 Sary taloha
2.5 Hetsika vita amin'ny litera
2.6 Vokatra ON1
2.7 Hetezo & hanapaka ahy
2.17 Vokatry ny sary Halftone
2.18 Vokatry ny Retro Circle Vintage
2.19 Sarimihetsika taloha
2.20 Nofy ratsy
2.22 Tsela-pahazavana antra
2.23 Vovoka tany an'efitra
2.25 Hariva manga
2.26 Hazzy Afak'andro
2.27 Nanoroka i Sun
2.28 Hetsika HDR
2.29 Efitra mahery HDR
2.30 Fifanohitra volomparasy
2.31 Hetsika mahafinaritra
2.32 Hetsika loko Photoshop
2.33 Cross-fanodinana ATN
2.35 Technicolor 2-strip
2.36 Loin mafy
3 Inona avy ireo sivana ho an'ny Photoshop?
Tutorial: ny fomba fametrahana presets amin'ny Photoshop sy Lightroom
hametraka presets amin'ny Photoshop
Amin'ny tranga Photoshop dia misy mety roa: fa ny sary dia amin'ny RAW na JPG. Raha iray RAW fisie Hisokatra ho azy ao amin'ny Photoshop's Camera Raw izy io. Raha iray JPG tsy maintsy hanokatra ny sary ianao amin'ny Photoshop, mankanesa any "sivana", "sivana manta fakan-tsary".
Raha vantany vao ao amin'ny Camera Raw isika dia handeha "Preset" ary homenay ny "teboka telo" izay manokatra safidy preset bebe kokoa (tandindona naseho tamin'ny sary etsy ambony). Ao amin'ny menio mitete-midina no hofidintsika manafatra profil sy presets. Farany, jereo ao amin'ny fampirimana ny preset te-hametraka ianao. Zava-dehibe izany, amin'ny kinova farany an'ny Camera Raw dia tsy mamela anao hanafatra ny preset mivantana amin'ny endrika xmp, tmila manafatra zip ianao, fisie voahazona.
hametraka presets ao amin'ny Lightroom
hametraka presets Tsotra be koa izy io, manana tombony ianao raha apetrakao ao Lightroom aloha izy ireo dia hiaraka amin'ny Photoshop avy hatrany. Hanomboka amin'ny fanokafana sary izahay ary mankany amin'ny tontonana "Preset". Tsindrio ny "teboka telo" hampiasa safidy bebe kokoa ary hisafidy "Import presets". Amin'ity tranga ity raha afaka manafatra ianao mivantana ny xmp.
Plugins sy sivana Photoshop maimaim-poana
Fanaraha-maso Layrs 2 Izany dia fanitarana maimaim-poana mifanaraka amin'ny Adobe Photoshop CC sy CC 2014. Ity plugin ity mamela ny mandeha ho azy hetsika sasany fa, na dia somary ifotony aza izy ireo, raha tsy anananao dia mila apetrakao isaky ny sosona izy ireo, ary miaraka amin'ny Layrs Control 2 dia azonao atao ny mampihatra ny fanovana mihoatra ny sehatra iray amin'ny fotoana iray Tena hoot raha te-hihary fotoana ianao!
Inona no azonao atao amin'ny Layrs Control 2?
Ovao anarana ny sosona sy ny lahatahiry
Esory ny effets izay tsy ampiasaina amin'ny sosona voafantina rehetra
Atsaharo ny vokatry ny sosona voafantina rehetra
Fafao ny sosona foana rehetra
Rasterize zavatra marani-tsaina
Mitadiava rakitra sy lahatahiry misy anarana mitovy amin'izany
Avadiho ho toy ny zavatra maranitra ny sosona voafantina rehetra
Sepia mampatahotra dia sivana maimaimpoana, mety mba hanomezana lamaody antitra sy kanto ny sarinao. Ny "sepia" dia effets mahazatra, fa ity sivana ity dia hahafahanao manome sentona hafa ny sarinao, tsy ny fanatratrarana ireo feon-tsakafo ihany manome "tantara" iray misaotra ny haavon'ny fifanoherana.
Miresaka sivana izay ahafahanao manome sentetika amin'ny sary anao, Hetsika taloha sary Izany dia safidy tsara hitondrana izany esory Retro izany amin'ny zavatra noforoninao Ary mazava ho azy fa maimaimpoana tanteraka izany!
Ity sivana maimaimpoana ity dia hanampy anao hanome ny sarinao a fijerin'ny nostalgika sy tantaram-pitiavana. vintage-action manahaka ny vokatry ny loko ary nuances an'ny fakantsary taloha sary, eny, ireo milina malaza Polaroid izay lamaody ankehitriny!
Hetsika vita amin'ny litera
Hetsika Lihtprint dia sivana maimaimpoana manahaka ny vokatry ny fanontana ny fakantsary voalohany, hany ka rehefa ampiharina amin'ny sary dia toa sary tena izy nentina tamin'ny lasa. Azonao atao ny misintona azy tanteraka maimaim-poana!
ON1 dia orinasa fampandrosoana an'ny rindrambaiko ho an'ny mpaka sary manana traikefa an-taonany maro ao amin'ity sehatra ity, mifantoka amin'ny fanomezana fitaovana mpaka sary matihanina sy mpankafy hanovana sy hanararaotana betsaka ny sarin'izy ireo.
Vokatra ON1 2021 Is a plugin novolavolain'ny orinasa, mifanaraka amin'ny Mac sy Windows, izay mamela anao manampy style sy effets an-jatony amin'ny sarinaos, manakaiky anao amin'ny valiny matihanina faran'izay tsara nefa tsy mila mandany fotoana be loatra amin'ny fanovana. Ny sivana rehetra dia nofidian'ny ekipa ON1, mifototra amin'ny famakafakana ny indostrian'ny sary, mitady ny modernity sy ny fanavaozana.
Ny teboka lehibe manohana dia ny plugin tsy miasa fotsiny ho toy ny plugin Photoshop, mifanaraka amin'ny rindrambaiko famolavolana hafa toa ny Adobe Lightroom, Capture One, Affinity Photo na Corel Paint Shop Pro, fa azo ampiasaina ho fampiharana tsy miankina ihany koa izy io.
Mampalahelo fa plugin ON1 Effects dia plugin iray karama, na izany aza Manolotra anao izy ireo ny fahafaham-po amin'ny fitsapana 14 andro maimaim-poana, tsy mila manome ny antsipirian'ny kara-trosanao ary tsy misy karazana fanoloran-tena hijanona.
Hetezo & hanapaka ahy
Hetezo & hanapaka ahy dia plugin maimaimpoana novolavolain'i Daniel Peruho izay ahafahanao mandamina ny asanao ao amin'ny Photoshop. Anisan'ireo fihetsika mahery vaika an'ity add-on ity dia manasongadina ny fahaizana misafidy vondrona misy sosona ary hitandrina azy ireo ho zavatra tokana na manondrana azy ho toy ny sary, ary manapaka pikantsary tsy ilaina.
CCS3Ps dia plugin ho an'ny Adobe Photoshop izay mamela anao hamadika mora foana sy haingana dia haingana ho takelaka CSS3Ps (vita amin'ny rahona ny fizotry ny fiovam-po), ny plugin tsara indrindra ho an'ireo izay mifantoka amin'ny endriny sy ny prototyping an'ireo pejin-tranonkala. Ianao dia afaka ampidino maimaim-poana ao amin'ny pejiny web.
Renderly dia plugin Photoshop maimaim-poana izay miasa milamina sy haingam-pandeha any aoriana, mamela anao manampy variants amin'ny efijery, mitantana fananana, famaritana amin'ny antsipiriany momba ny famolavolana ary manondrana azy ireo ho azy amin'ny tsindry iray. Raha te-misintona an'ity add-on mahafinaritra ity ianao ary miditra amin'ny antsipiriany misimisy momba ny fomba fiasa dia azonao atao izany pejy ofisialy.
Ilaina ny torolàlana amin'ny famolavolana, indrindra raha mila valiny matihanina ianao. Torolàlana ho an'ny torolàlana dia plugin mifanaraka amin'ny Photoshop, Adobe Xd, Adobe Illustrator ary Sketch izay manala ny asa maharary amin'ny fanampiana torolàlana sy kofehy. Na dia tsy plugin maimaim-poana aza izany dia mitentina eo amin'ny 6 euro isam-bolana ny fahazoan-dàlana, atolotra ny fitsarana 14 andro.
Composer dia plugin maimaim-poana mifanaraka amin'ny Adobe Photoshop CS5, CS6 ary CC. Ahafahanao manavao ireo firafitra maro sosona amin'ny tsindry totozy tokana. Mila mifidy ireo sosona na vondrona efa novainao fotsiny ianao, mifantina izay sosona na firafitra tianao ampiharina amin'ny fanovana ary ampiasao ny baiko hanavao ireo sosona voafantina. Amin'ireto baiko ireto dia azonao atao ny mampifanaraka ny fomban'ireo sosona voafantina, ny opacity na ny fomba fampifangaroana, havaozy ny toerana misy ireo sosona voafantina ary ampifanaraho ny fahitana ireo sosona.
Getty Images banky sary malaza be izy, manolotra plugin maimaim-poana mifanaraka amin'ny Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro ary After Effects. Tsy very kalitao, ity add-on ity dia hahafahanao mandrindra ny asanao, miditra amin'ny sary, sary ary horonan-tsary tsy mivoaka ny programa.
Ink dia plugin iray, novolavolain'ny chrometaphore, natokana ho an'ny ekipa mpamorona tsy mahalala an'ity fitaovana ity. Ity plugin ity mamela anao manampy fampahalalana fanampiny amin'ny antontan-taratasy Photoshop ary azonao sintonina maimaim-poana amin'ny tranokala izany.
Ity plugin maimaim-poana ity hanampy anao hamorona modely (maodely indrindra ho an'ny tranonkala) ary manamora ny asa famolavolana, velositey mampiditra zavatra marani-tsaina sy singa efa voalahatra mialoha ahafahanao mampiditra azy ao anaty antontan-taratasinao.
Google Nik Collection dia iray amin'ireo plugins tsara indrindra ho an'ny Photoshop. Ity plugin ity misy fitaovana 7 mampino mahasoa amin'ny fametrahana effets cool sy sivana amin'ny sarinao ary miasa miaraka amin'ny sarin'ny volonao:
Analog Efex Pro: maka tahaka ny vokatry ny fakantsary taloha.
Silver Efex Pro: sivana mainty sy fotsy.
Sharpener Pro: milalao amin'ny haavo ny maranitra ny sary.
Farito: hampihenana ny haavon'ny tabataban'ilay sary.
Fiainana: milalao amin'ny loko sy ny lokon'ny sary.
Color Efex Pro: sivana hanovana sy hamerenana ireo loko.
HDR Efex Pro: mamorona sary HDR.
Na dia tsy plugin maimaim-poana aza izany, ao amin'ny tranokalan'i Google Nik Collection afaka miditra amin'ny andrana 30 andro maimaim-poana ianao. Eto amin'ity tranonkala ity dia afaka mahita ny rohy hampidinana azy maimaim-poana.
Glitch Is a sivana maimaim-poana izay manahafana ny fisehon'ny kasety VHS taloha, ny loko miloko sy ny lesoka kely dia miteraka fiatraikany mety tsara hanomezana endrika hafa ny sarinao.
Vokatry ny sary Halftone
Con Vokatry ny sary Halftone azonao atao ny maka tahaka ny loko sy firafitry ny sary vita pirinty amin'ny gazety. Ity sivana maimaimpoana ity dia safidy tsara sy mamorona izay hanome ny toetranao sary ao anaty tsindry iray monja.
Vokatry ny Retro Circle Vintage
Vokatra Retro Circle Vintage dia sivana noforonina tamin'ny fitaovana Photoshop natao hanomezana ny sarinao a endrika Retro, mainty sy fotsy ary voaravaka endrika, ity vokatra ity dia mampatsiahy ny fakantsary taloha ary maimaim-poana tanteraka.
Miaraka amin'ny sivana Old Film, mifanaraka amin'ny Adobe Photoshop sy Lightroom, ny sarinao dia ho toy ny sary nalaina tamina sarimihetsika. Azonao atao ny misintona azy ato amin'ity rohy ity ao anatin'ny fonosana iray izay misy effets 20 maimaim-poana.
Nofy ratsy dia sivana maimaimpoana ho an'ny Photoshop milalao amin'ny tsy fitovizan'ny sary hanomezana feo maizimaizina ny sarinao, toy ny hoe nofy ratsy.
Silver Izy io dia iray amin'ireo sivana maimaimpoana izay tiako indrindra amin'ny Photoshop sy Photoshop Elemen. Avadiho ho mainty sy fotsy ny sarinao ary, na dia priori aza dia toa tsy zava-baovao, baomba io satria toa saika sary no jerena.
Ity sivana Photoshop-mifanaraka ity ampidiro ao amin'ny sarinao ny tara-pahazavana ary andiam-panitsiana maromaro omena azy ireo a fikasihan-tanana. Tsela-pahazavana antra Hamela anao hamorona sary Retro tsara indrindra ary ny zavatra tsara indrindra dia ny ahafahanao misintona azy maimaim-poana.
Vovoka tany an'efitra
Te hanome feo mafana sy mahafinaritra amin'ny sarinao ve ianao? Amin'ny Desert Dust dia azonao atao amin'ny tsindry iray monja. Ity sivana maimaimpoana ity dia hanampy anao hanome a famirapiratana manokana sy tena mamorona amin'ny sarinao amin'ny Adobe Photoshop.
Summer Haze no sivana mety indrindra hanovana ny sarinao fahavaratra, milalao amin'ny feo sy hazavana mamorona vokatra vaovao sy hafa. Eny tokoa, ampiasao amin'ny sary ety ivelany, amin'ny sary maizina dia matetika tsy dia tsara loatra.
Hariva manga dia sivana, mety tsara ho an'ny omeo sento manaitra sy miafina ny sarinao. Raha tianao hampita teti-dratsy iray ny sarinao, sintomy ity vokatra maimaim-poana ity ary aza misalasala manandrana azy.
Hazzy Afak'andro no sivana tadiavinao omeo vokatra mahavariana sy mafana ny sarinao, ny fitambaran'ireo sarontava miloko hafa dia hanome ny sarinao tsy mampino ny sarinao. Azonao atao ny misintona an'ity sivana ity ho an'ny Photoshop maimaim-poana.
Nanoroka i Sun
Nanoroka i Sun dia fonosan'ny sivana ho an'ny Adobe Photoshop izay misy vokany 10 rehetra izay milalao hazavana hanova tanteraka ny sarinao Mahagaga! Azonao atao koa ny manao ny sary nalaina tamin'ny antoandro be toy ny nalaina tamin'ny filentehan'ny masoandro. Sintomy maimaim-poana tanteraka ireo sivana rehetra ireo.
Indraindray rehefa maka sary ianao dia sorena isika rehefa mahita ny antsipiriany marobe izay very noho ny fahaverezan'ny fifanoherana matetika. Hetsika HDR, misy fihetsika 4 (tany am-boalohany, maivana, ara-dalàna ary mavesatra) ka azonao atao sitrana ny antsipiriany sy ny lokon'ny sarinao Mahagaga ny vokany!
Efitra mahery HDR
Azonao atao ny mahazo an'io vokatra io ihany miaraka amin'ity sivana maimaimpoana ity, ampidino ary avereno amin'ny Efitra mahery HDR ny sakan'ny feony amin'ny sarinao. Ireo karazana fanitsiana ireo dia hitondra ny sarinao any amin'ny sehatra hafa.
Raha te-hanome taratra romantika ny sarinao ianao, ity no sivana tadiavinao. Fifanohitra volomparasy Is a effets maimaimpoana ho an'ny adobe photoshop izay manome ny sarinao a loko volomparasy sy mavokely, milalao ny mifanohitra amin'izay mba hahazoanao valiny tokana.
Hetsika mahafinaritra Io no sivana mety indrindra hanovana ny sarinao amin'ireo tambajotra sosialy. Ity vokatra maimaim-poana ity dia mifanentana amin'ny Adobe Photoshop miasa tsara amin'ny sary misy loko maro, ary manintona kokoa ny sarinao Manandrama azy!
Hetsika loko Photoshop
Hetsika loko Photoshop Is a fonosana effets maimaimpoana ho an'ny Photoshop izay ahitana karazana sivana mahafinaritra be dia be hiasa amin'ny sarinao. Ny fonosana dia misy hetsika 12 totaliny:
Faly (12): Vokatry ny fakan-tsary Polaroid
Lohataona (11): glitter maitso
Fahavaratra (10): manome feo mafana ny sarinao, toy ny sary nalaina tamin'ny fahavaratra
Manonofy (9): Mampitombo ny fifanoheran'ny sarinao ity sivana ity. Tiako ny vokany!
Bleach malefaka (8): manazava sy manafotsy ny feon'ny sarinao
Inverted Mary Blu (7): sivana maitso ho an'ny sarinao
Maria nivadika (6): omeo feo manjelanjelatra ny sarinao, apetaho amin'ny sary ary ho hitanao fa mampahatsiahy anao ny kanto pop ny valiny.
Grain BW matihanina (5): Avadiho ho mainty sy fotsy ny sarinao ary ampio voa sy firafitra, ity no tiako indrindra.
BW matihanina (4): Ity vokatra ity dia tena mitovy amin'ny teo aloha, ampiasao izany rehefa toa be loatra ny voam-bary.
Mile very (3): misy fifanoherana avo lenta, asio feo maitso ny sarinao
Fitiavana sarotra (2): Manampia vokatra mavokely amin'ny hoditra ary ampitomboy ny tsy fitovizan'ny sary.
Fitiavana malefaka (1): Ny vokany mitovy amin'ny teo aloha ihany, fa miaraka amin'ny famirapiratana ampiarahina, tsy dia mifanohitra firy sy malefaka kokoa.
Io vokany io maka tahaka ny fivoaran'ny sary taloha amin'ny akora simika, ny valiny dia sary iray misy vokany tena loko, misy fifanoherana sy saturation avo. Raha melankolika sary analogie ianao dia tsy mila miverina mihetsika intsony, sintomy maimaim-poana Cross-fanodinana ATN ho an'ny Photoshop ary apetaho amin'ireo sary nomerika ireo sehatra ireo.
Vokany mitovy amin'izany no ho azonao Cross Processed, sivana maimaimpoana hafa mifanaraka amin'ny Adobe Photoshop sy Lightroom.
Ny fihetsika 2 amin'ity fonosana ity dia manova ny lokon'ny sarinao ho alao modely ny fizotran'ny Technicolor 2-strip malaza be amin'ny sarimihetsika nandritra ny 20 sy 30. Ny tsara indrindra dia mamorona sosona vaovao izy mba tsy hanimba ny sarinao voalohany. Afaka misintona ianao Technicolor 2-strip ho an'ny Photoshop maimaim-poana tanteraka!
Hetsika Lomo mafy mampihatra vokatra tena mahaliana amin'ny sarinao, miasa tsara amin'ny saripika. Manomeza sary a Retro sy taloha no tena manintona. Izy io dia mifanaraka amin'ny Photoshop ary azonao atao ny misintona azy maimaim-poana.
Inona avy ireo sivana ho an'ny Photoshop?
Sivana ho an'ny Photoshop loharanom-pahalalana mahafinaritra izy ireo amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny sarinay na manome azy ireo ny vokany hanome azy ireo fifandraisana miavaka.
Mampiasa sivana amin'ny Photoshop koa manamora kokoa ny asa rehefa avy namboarina mialoha ary tsy maintsy ampiharintsika amin'ny sary na amin'ny faritra manokana ao aminy fotsiny izy ireo, mamonjy antsika rehetra ireo fikirakira asa mandra-pahita ny valiny tadiavintsika.
Midira amin'ny sivana ho an'ny Photoshop maimaim-poana fa nanoro hevitra anay tamin'ity fanangonana ity ianao dia mila mametraka azy ireo fotsiny ary avy eo dia hiseho eo amin'ny farany ilan'ny menio Filter amin'ny programa Adobe izy ireo.
Fantatrao ve ny toerana bebe kokoa misintona sivana ho an'ny Photoshop? Avelao izahay haneho hevitra ary atoroy ireo izay ampiasainao indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Maherin'ny 35 plugins sy sivana Photoshop maimaim-poana
satria ny plugin na ny sivana dia nantsoina mba hanafoanana ny manga, araka ny aseho amin'ny sary
Valio i daviss
hahaha mangataka fahazoan-dàlana aminao izy ...
xaco dia hoy izy:
Salama vitsivitsy pluyin mba hanao vokan'ny fo amin'ny sary
Mamaly an'i xaco
Philip Tapi dia hoy izy:
Valiny tamin'i Felipe Tapi
Silvana dia hoy izy:
Mila ireo plugins aho hanonta sary mihoatra ny iray isaky ny ravina satria tsy mahita andiana sary aho. Mila anao maika aho misaotra.
Mamaly an'i silvana
duive dia hoy izy:
eny izay sivana tsara
Mamaly amin'ny fialamboly
Jaume deu dia hoy izy:
Manao sary an-tsary, alina, natiora ary makro aho ary tiako ny manana plugins na sivana hahafahako manatsara ny sariko maimaimpoana.
Mamaly an'i Jaume Deu
Tsy avelako hisintona an'izay